“Ronaldo ayaa dib u dhigayay Dybala” – Giorgio Chiellini – Gool FM
“Ronaldo ayaa dib u dhigayay Dybala” – Giorgio Chiellini
(Turin) 13 Sebt 2021. Difaaca kooxda Juventus ee Giorgio Chiellini ayaa sheegay inuu Paulo Dybala hoos u dhac ugu yimid labadii sano ee lasoo dhaafay joogista Cristiano Ronaldo awgeed.
Ronaldo ayaa ku sugnaa Bianconeri saddex xilli ciyaareed kaddib markii uu kaga soo biiray Real Madrid 2018 kahor inta uusan xagaagan ku laaban naadigiisii hore ee Manchester United.
Ka tagistiisa Juve ayaa reebtay saameyn aan wanaagsaneyn maadaama ay hal dhibic kaliya heshay saddexdii ciyaar ee ugu horreysay Serie A, hase ahaatee, kabtanka kooxda ayaa qaba inay sidoo kale heli doonaan saameyn wanaagsan bixitaanka Ronaldo awgiis.
Chiellini ayaa marka hore uga mahad celiyay xiddiga reer Portugal shaqadii u qabtay The Old Lady, waxaase uu hoosta ka xarriiqay inay dhaqaaqi doonaan la’aantiis sidoo kale kooxdu ay noqon doonto mid uu xiddig sare u yahay Paulo Dybala.
“Tani waxay noqon doontaa kooxda Dybala, labadii sano ee lasoo dhaafay, celceliskiisa goolasha waxay u yaraadeen joogista Cristiano awgeed, balse isaga waa xiddiga furaha u ah kooxda qof walba ayaana u qirsan” ayuu difaaca waaya-aragga ah ee xulka Taliyaaniga ku sheegay warreysi uu siinayay DAZN.
Si kastaba ha ahaatee, Dybala ayaa seegay ciyaartii Sabtidii la garaacay Juventus markii ay guuldarro 2-1 kala kulantay Napoli, waxaase uu sidoo kale helay daqiiqado kooban kahor inta uusan xulkiisa Argentina u ciyaarin kulammadii is-reeb-reebka Koobka Adduunka.